किशोरावस्थामा यौन सम्पर्क नगर्ने सल्लाह उचित कि अनुचित ! -
२०७६, २९ माघ बुधबार १४:२९ February 12, 2020 clickonLeaveaComment on किशोरावस्थामा यौन सम्पर्क नगर्ने सल्लाह उचित कि अनुचित !
ब्राजिलले किशोरकिशोरीलाई यौन सम्पर्क विवाहपछिको लागि जोगाएर राख्न आग्रह गरेको छ। किशोरावस्थामा गर्भधारणको उच्च दरलाई कम गर्न सरकारले त्यस्तो आग्रह गरेको हो।
महिला, परिवार तथा मानवाधिकार मन्त्री दमारेस एल्भिसले ल्याएको किशोरावस्थामा यौनबाट टाढा बस्न प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रमको व्यावसायिक स्वास्थ्य सङ्गठनहरूले भने आलोचना गरेका छन्। मन्त्री एल्भिस राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारोले समर्थन गर्ने इशाई नेता हुन् जसमाथि नागरिकमा धार्मिक अजेन्डा लाद्ने प्रयास गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।
गतवर्ष उनले बीबीसी ब्राजिललाई भनेकी थीईन्: “आनन्दका लागि मात्र यौन खोज्नेहरूको कडा अभियान हामीले देखिरहेका छौँ।” उनले किशोरावस्थामा हुने गर्भधारण नियन्त्रण गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी’ तरिका भनेको ‘कन्डम, उपकरण र गर्भनिरोधक चक्की’ नभैइ यौनबाट अलग रहनु नै रहेको बताएकी थीईन्।
ब्राजिलको सरकारी तथ्याङ्क अनुसार किशोरावस्थामा हुने गर्भधारण दर सन् २००० बाट सन् २०१७ मा आउदा ३६ प्रतिशतले घटेको थियो। तर त्यो अझै पनि अन्य ल्याटिन अमेरिकी देशमा जस्तै उच्च नै छ।
पन्ध्रदेखि १९ वर्षमा हुने गर्भधारण दर प्रति एकलाखमा ६२ छ जसको विश्वव्यापी औसत ४४ रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्कले देखाउँछ। त्यस समूहको सबैभन्दा उच्च गर्भधारण दर भने पश्चिम र मध्य अफ्रिकामा छ। ब्राजिलको सरकारी नाराले नै ‘सबथोक सही समयमा’ भन्छ र त्यसलाई स्थानीय भाषामा ह्यासट्यागसाथ सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गरिएको छ।
मन्त्री एल्भिसले किशोरावस्थाको गर्भधारण र यौनरोगविरुद्ध काम गर्नका लागि उक्त अभियानलाई नयाँ प्रयास बताएकी छन्। यसले किशोरकिशोरीहरूलाई यौन सम्पर्क राख्नु अगाडि सोच्न बाध्य पार्ने उनको भनाइ छ।
सरकारले यसलाई बाध्यकारी वा नैतिक बहसको बिषय भने नबनाउने जनाएको छ। राष्ट्रपति बोल्सोनारोले यसाघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अभिभावकहरूका लागि बनाएको एुटा पुस्तिकाबाट महिलाको प्रजनन प्रणालीको रेखाचित्र र कन्डमको प्रयोग गर्न सिकाउने पाना च्यात्न लगाएका थिए।
तर स्वास्थ्य सङ्गठनहरूले यो कार्यक्रमको चर्को आलोचना गर्दै यो प्रभावकारी हुने कुनै वैज्ञानिक आधार नरहेको बताएका छन्। स्वास्थ्यस्याहारसम्बन्धी एक सङ्गठनले विज्ञप्तिमा भनेको छ: “यस बिषयको (वैज्ञानिक रूपबाट) पुष्टि हुने एकमात्र उपाय भनेको किशोरकिशोरीहरूलाई पर्याप्त यौन शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच दिनु हो।”
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्लुएचओका अनुसार विद्यालयभित्र र बाहिर दीने यौन शिक्षाले ‘यौन क्रियाकलापहरू, त्यसको जोखिम वा यौनरोग एवम् एचाअीभीको सङ्क्रमण दर बढाउँदैन।’
डब्लुएचओले भनेको छ: “यौनबाट अलग राख्न प्रोत्साहन गरिने कार्यक्रमहरूले ढिलो यौन उत्साह सिर्जना गर्न, यौन सम्पर्क दर घटाउन वा यौनसाथी कम गर्न प्रभावकारी भूमिका खेल्दैनन्।”
“कन्डम र गर्भनिरोधकसम्बन्धी ज्ञानको साथ यौन गतिविधि ढिलो गर्न प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू प्रभावकारी हुन्छन्।” एकजना महिना अधिकारवादी एवम् विपक्षी सांसद साम्बीया बोमफीमले सरकारले जटिल समस्यालाई किशोरकिशोरीको आफ्नै निर्णयमा छाडेको बताएकी छन्।
एक ट्वीटमा उनले लेखेकी छन्: “जुन देशमा बलात्कारका अधिकांश पीडितहरू १३ वर्षमुनिका छन्, के त्यहाँ किशोरीहरूलाई नाइ भन्ने छुट होला?”
गत वर्ष एल्भिसको कार्यालयले ब्राजिलको कङ्ग्रेसमा किशोरकिशोरीको गर्भधारणसम्बन्धी एउटा कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। जसमा निम्त्याइेका वक्ताहरू यौनबाट अलग रहन प्रोत्साहन गर्ने अन्तर्‍ाष्ट्रिय समूहहरूमा आबद्ध थिए।
“किशोरावस्थाको गर्भधारण सामान्यत: किशोरीको स्वेच्छाले हुँदैन, ती किशोरीसँग आफ्नो जीवनलाई असर गर्ने निर्णयमा नियन्त्रण हुँदैन।”
बहामसपछि अमेरिका पुग्यो शक्तिशाली आँधी डोरिअन
२०७६, २० भाद्र शुक्रबार ०९:०२ September 6, 2019 clickon
किम द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पसँग हुने वार्ताका एजेन्डा तय
२०७५, २८ जेष्ठ सोमबार ११:०१ June 11, 2018 clickon
श्रीलंका आक्रमण : अनुसन्धान क्रममा कैयौं इजिप्टेली र पाकिस्तानि पक्राउ
२०७६, १२ बैशाख बिहीबार १८:१३ April 25, 2019 clickon